केवल साहसी र आफ्नो मा विश्वस्त मान्छे को भावना सयौं वा किलोमिटर पनि हजारौं दूरी मा सम्बन्ध स्थापना। हुनत कहिलेकाहीं कहिलेकाहीं दैनिक तालिका र समस्या छैन उही शहर देखि मान्छे भेट्न अनुमति दिनुहोस् गर्छन्। त्यसैले तपाईं मनपर्ने टाढा को बात छ छ जो केही मध्ये एक हुनुहुन्छ भने, म तपाईं आश्वस्त, त्यहाँ केही असम्भव कुरा आफैलाई र आफ्नो बल विश्वास छ।
अधिकांश मानिसहरू लामो र सफल लामो-दूरी सम्बन्ध पूर्ण अर्थहीन छैन र यस्तो सम्बन्ध को परिणाम जहिले पनि खाली हुनेछ स्पष्ट स्टेरियोप्रकार छ। तर व्यवहार मा, अक्सर यसलाई यो साँचो होइन भनेर गर्दछ। कसरी लामो-दूरी सम्बन्ध राख्न? यो सबै तपाईं दुई निर्भर बुझे गर्नुपर्छ। एक एकल पनि व्यक्ति नजिक महसुस हुन सक्छ, र बस जीवित छैन नै शहर गलत अर्थ लगाइन्छ, तर पनि एउटै घर मा रहेको।
लामो-दूरी सम्बन्ध सधैं स्पष्ट बाहिर राखिएको हुनुपर्छ र सबै आशा तय गर्न तपाईं बीच। तपाईं सधैं एक तालिका निर्माण भने, एक सम्बन्ध योजना गर्नु पर्छ। उदाहरणका लागि, केही दिनमा पटक एक जोडी तपाईं सम्पर्कमा द्वारा ई-मेल धेरै पटक व्यक्ति भेट्ने गर्न फोनमा र महिनामा एक पटक कुरा गर्न एक हप्ताको हुनेछ व्यवस्था सुनिश्चित। अर्को शब्दमा, तपाईं को दुवै के संगति अपेक्षा गर्न सकिन्छ स्पष्ट जान्नु आवश्यक छ। बस संचार को अनुसूची जस्तै आफ्नो संचार अभाव छैन आउँछन् सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।
आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न लाज हुन सञ्चार गर्दा लामो-दूरी सम्बन्ध सधैं खुला हुनुपर्छ। किनभने तपाईं आफ्नो भावना व्यक्त गर्न, आफ्नो प्रिय वा इसारा, न त अनुहार, न त स्पर्श सूचित गर्न केहि गर्न सक्दैन यो धेरै कठिन हुनेछ, हुनत छ मात्र शब्द मार्फत। अर्डर सभामा हुन धेरै टाढा र साधारण छ अज्ञात छैन कुराकानी को विषय, हामी छलफल र आफ्नो दैनिक जीवनमा हुन्छ रूपमा खुसी क्षणमा र समस्याहरूको सबै बारे आफ्नो साझेदार संग कुरा गर्न आवश्यक छ। र कसरी कदर गर्न कुरा गर्न नबिर्स आफ्नो एक प्रेम, आदर र यो संसारमा छ किनभने यो केवल मूल्यांकन कसरी।
दूरी सम्बन्ध सम्भव स्वतन्त्र हुन बनाउन, यो मूल्यांकन गर्छौं। कसरी कुनै कुरा प्रिय र प्रिय मान्छे, तपाईं उहाँलाई गरौं गर्न सकिँदैन, त्यसैले उहाँले आफ्नो जीवन बाँकी लिए। आफ्नो भाग्य साथै यो वर्तमान साथीहरू, राम्रो र रोचक काम र सोख सधैं हुनुपर्छ। र आफ्नो प्रेम हाल सम्म तपाईं टाढा छ भने, यो तपाईं पर्खने कोठा मा आफ्नो जीवन बारी छ कि होइन। जीवन सधैं अगाडी बढ्दै छ, र नयाँ क्षितिज अप खोल्न हतार गर्नुपर्छ। अलग समय स्थान अर्को बैठक लागि मलिन र dreary प्रतीक्षा भन्दा धेरै छिटो हुनेछ, usefully बिताए।
दूरी सम्बन्ध सधैं अर्को "ताप" आवश्यक पर्दछ। यो कल्पना समावेश गर्नुपर्छ। यो रोमान्टिक सामग्री, मेल वा मनपर्ने रंग को फूलगुच्छा द्वारा पठाइएको उपहार एउटा अनपेक्षित पत्र हुन सक्छ। अर्को शब्दमा, साधारण दैनिक सम्पर्क आश्चर्य पतला हुनुपर्छ।
कसरी सम्बन्ध राख्न एक दूरी मा? यो प्रश्न गर्न सम्भव जवाफ जनसंचार छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सबै बाहिर हुनेछ भनेर विश्वास गर्न। दृढ समान सहरमा बस्ने, वा एक घर मा दुई प्रेमीहरूको विश्वास गर्न यो आवश्यक छ - यो वास्तविक हो। कुनै पनि जोडी दूरी हटाउन एक मौका छ, र तपाईं बीच किलोमिटर हजारौं छ पनि भने। जोडे को एक धेरै किनभने दूरी हटाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई विश्वास को कमी को ठीक माथि तोड्न। त्यहाँ समय समयमा गर्न साझेदार प्रत्येक सम्बन्ध को वास्तविकता बारे शङ्का छ। दोस्रो आधा जीवन को यस्तो कठिन अवधिमा कायम र सबै ठीक हुनेछ भन्ने निश्चित गर्न निश्चित हुनुपर्छ।
विश्वास र आफ्नो जीवन को कठिन क्षणमा प्रत्येक अन्य समर्थन। यो एक बाधा छ - र प्रेमको लागि दूरी कि सम्झना।
Sissy: पहिचान गर्न र भाग्ने
आइमाइहरु गर्न सल्लाह: जीत कसरी एक मानिस-कन्या
कसरी आकर्षण र एक मान्छे पत्राचार प्रेम दुवै गिरावट?
ग्राउंडिंग र vanishing - फरक के? विद्युत ग्राउंडिंग र vanishing
आईफोन4आईओएस 8 कसरी स्थापना गर्ने: सुझावहरू, सिफारिसहरू, निर्देशनहरू
प्रभावकारी प्रविधी, विधि र व्यवसायीक को सिफारिसहरू: grudnichka रोल कसरी सिकाउन
सारांश: "कांस्य होर्समैन" ए पुष्किन